Maamulaha shirkada OnePlus ayaa shaaca ka qaaday in OnePlus 7 Pro uu yeelan doono shaashad cajiib ah | Androidsis
Soo-saareyaashu wali waxay raadinayaan siyaabo ay kaga soocnaadaan tartanka, OnePlus ayaa ka mid ah.
Munaasabaddan, soosaaruhu wuxuu ku faanaa taas shaashadda xigta OnePlus 7 Pro beddeli doonaa sharciyada ciyaarta. Wareysi gaar ah oo lala yeeshay qarka u saaran, Pete Lau, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda, ayaa xaqiijiyay in qalabku yeelan doono shaashad cajiib ah.
Wareysiga, fulintu waxay xaqiijisay in magacyada labada taleefan ee la bilaabi doono bisha soo socota ay yihiin OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro. Si kastaba ha noqotee, kaliya kan dambe ayaa la imaan doona shaashadan cusub oo iyaga ka qaali ah seddex jibaar miisaaniyadda caadiga ah ee loogu talagalay bandhigyada.
Runtii, badeecadeenna cusub ayaa adeegsan doonta tikniyoolajiyadda soo-bandhigista oo dhan. Waxaan si weyn u maalgashanay (tiknoolajiyaddu waa 3x kharash oo ah bandhigyo kale oo caalami ah) horumarinta tikniyoolajiyadda oo kaliya loogu talagalay OnePlus, oo ah khibrad shaashad shaashad u leh oo runtii adduunka ugu fiican. https://t.co/HVDhfI8uDA
- Pete Lau (@ nacaybtire2007) April 22, 2019
Mr. Lau wuxuu ka taxaddaray inuu bixiyo wax faahfaahin ah oo shaashad ah, laakiin wuxuu sheegay inuu naxay markii ugu horreysay ee uu arko. Shaashadda OnePlus 7 Pro "waxay dib u qeexi doontaa si dhakhso leh oo siman" waana "mid aad u siman oo aad u fiiqan".
Waxaa la yiri guddiga cusub wuxuu leeyahay heer cabbitaan oo ah 90 Hz, kaas oo ka dheereeya taleefannada badankood xilligan. OnePlus maahan shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta taleefan leh heer cabir sareeya. Sharp, Razer, iyo ASUS waxay horeyba taleefannadooda ugu haysteen meheradooda bandhigyo leh cabirro cusbooneysiin ka sarreeya 60 Hz. Marka laga reebo ASUS, taleefannada Sharp iyo Razer dhab ahaantii waxay leeyihiin heer cabbir ah 120 Hz.
Sida dhammaan taleefannada cusub ee OnePlus, kuwani way ka qaalisan yihiin kuwii hore. Soo-saaraha waa inuu ku qanciyaa iibsadayaasha in kororka sicirka uu runtii u qalmo.
OnePlus 7, laftiisa, ma soo bandhigi doono shaashadda cusub iyo muraayadaha xaday ayaa sheegaya inay sii haysan doonto tikniyoolajiyadda degdegga ah ee 20W OnePlus 6T waxayna sidoo kale yeelan doontaa laba kamaradood oo gadaal ah. Nooca Pro ma aha oo kaliya shaashad ka fiican, laakiin sidoo kale bateri weyn, saddex kamaradood oo gadaal ah, iyo 30-watt oo taageero degdeg ah lagu soo oogo.
Pete Lau ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo wax yar oo ku saabsan isaga. dhacdo daahfurka taleefanka, taas oo lagu xamanayo in loo asteeyay 14-ka May.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maamulaha OnePlus ayaa shaaca ka qaaday in OnePlus 7 Pro uu lahaan doono bandhig cajiib ah